नेकपाले कार्यकर्तालाई झन्डा मात्रै बोकाउने काम दिन्छ कि अरु पनि ? – Nepal Reports
नेकपाले कार्यकर्तालाई झन्डा मात्रै बोकाउने काम दिन्छ कि अरु पनि ?
जेठ ३०, नयाँ बहस सुरु भएको छ । हुन पनि लामो समयसम्म त्यस्तो भयो जहाँ पार्टीका कार्यकर्ता हातमा झण्डा बोकेर सडकमा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा घन्काउँदै हिँड्थे । ती कार्यकर्ता एक अर्का पार्टीलाई गाजिगलौैजमा उत्रिन्थे । सडकमै कार्यकर्ताको ‘विजनेस’ थियो । सत्तामा हुँदा काम नगर्ने र विपक्षी हुँदा सडकमा आउने धेरैजसो दलको चरित्र छ ।
राजनीतिक आन्दोलन होस् वा सिङ्गो पार्टी परिचालनमा कार्यकर्ताको नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुद्दा बदलियो तर कार्यकर्ता अझै बदलिएका छैनन् । कुनै पनि पार्टीले देशको विकासका लागि कार्यकर्ता परिचालनको योजना ल्याएका छैनन् ।
विद्यार्थीमा क्रियाशील भएको दुईथरी जनशक्ति छ । एउटा राजनीतिक नेतृत्वबाट रूपबाट आएको जनशक्ति छ । अर्को शैक्षिक नेतृत्वबाट आएको जनशक्ति छ । तर शैक्षिक नेतृत्वबाट आएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । उनीहरू शिक्षित छन् । उनीहरूमा दक्षता, क्षमता र योग्यता छ । त्यसैले उनीहरूलाई जता पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।